Umenzi weeLampu kunye nabaxhasi bezibane -Giga Lighting
Uyilo lweendlela zobungcali kunye nomenzi we-lamp ukusukela ngo-1995.
I-Pendant ye-LED kunye nabanye
Udonga / I-Spop / track
Abavelisi besibane bezingcali kwimveliso yokukhanyisa izibane kunye nezibane zomgangatho. Ukugxila kuYilo lokukhanyisela okukhokelwa, imveliso kunye nesisombululo.
Izithambi zethu zibandakanya izibane zokuhombisa kunye nokukhalimela kwentengiso.
I-Giga ekhanyayo kwi-Inter Inter Inter Irt 0465
I-Compling ekhokelayo& I-Pendant ye-LED 0465 uthothoIsitayile: Isibane sanamhlanje, isibane sangokuhlwa, isibane sokuhombisa ekhayaIzinto: I-Iron + AprylicUbungakanani: dia. I-400mm / 600mm / i-800mmLumen: 80-85lm / w, timedFaka umbala: SANDY WOFH / SANDY Black / Golden Braing / PeplenUmthombo wokukhanya: Khokele i-2835Isiqinisekiso: CEB / CB / VDE / TUV / IL / IL / ETL / SAA
I-Giga ekhanyayo kwi-Inter Inter Inter kwi-0512
IpendantUthotho hayi .: 0512Isitayile: Isibane sePostmodernism LampIzixhobo: Intsimbi engenasibala& AcrylicUbungakanani: dia. I-550mm / i-800mmGqibezela: UkupeyintaUmthombo wokukhanya: I-3030Isiqinisekiso: CEB / CB / VDE / TUV / IL / IL / ETL / SAA
I-Giga ekhanyayo kwi-Akhawunti ye-Giga i-20210
I-Gigalifight kwiNomi.Ngamava obutyebi bobutyebi, rhoqo i-ancts i-Advavery Privery kwaye wazisa izixhobo ezinobuchule. Ngaphandle koko, sinenkqubo yesandi yokulawulwa komgangatho ukwenza uvavanyo olusemgangathweni ongqongqo. Yonke le nto inika iimeko ezifanelekileyo zokuvelisa umgangatho ophezulu.
I-Giga ekhanyayo kwi-Classiright ingaphakathi yoyilo luka-20169
Isibane esikhokelayo esikhokelayo, sikhokeleIsixhobo: I-Aluminium + inyibiliki + AprylicUbungakanani: dia. I-420mm / i-600mm / i-800mmLumen: 4300lm, 5270lm, i-8600lmFaka umbala: Isanti emhlophe / i-sandy black / yegolide eqaqanjisiweyoUmthombo wokukhanya: Khokele i-2835Isiqinisekiso: CEB / CB / VDE / TUV / IL / IL / ETL / SAA
IiNkonzo zeOEM / ze-ODM
Ukukhanya kwe-giga ngumvelisi we-giga umvelisi we-lamp onobuchule kunye neqabane elinamandla lokurhweba ngezinto ezikhokelweyo kunye neeprojekthi. Ngaphezulu kweminyaka engama-25 yamava okuvelisa ukukhanya kweemveliso zaseYurophu, ngokungathandabuzekiyo sikholelwa ukuba sinomonde, sinokuthenjwa, sinoxanduva kwaye sinomdla. Siyazi, ngomonde ngakumbi kunye nokuzithoba ngakumbi, siya kuba namathuba amaninzi okubonelela ngezisombululo ezingcono kubathengi bethu. Ke, sihlala siqhubeka "sijolise ekugqweseni, sigxile ebantwini, sinentembelo kwaye siphumelele kumoya wokufunda kunye ne-Enterpriser."
1. Uyilo lwethu: Ngaphandle kokugqwesa kwethu kwiShishini le-ODM, sikwabonelela ngenkonzo ye-OEM yokhuphiswano
2. Amava: ngaphezulu kweminyaka engama-25 yovelwano lwasekhaya lokuhonjiswa, iqabane lakho elinokuthenjwa.
3. I-OEM / ODM: Sele sithumela amakhulu eemveliso zethu kubathengi kumazwe ahlukeneyo minyaka le
Kusekwe ubudlelwane obuqinileyo ngemakethi ephambili
Abavelisi besibane base China-abavelisi bokukhanya kweGiga
Umgangatho womgangatho ophezulu uqhuba ngendlela yokuyila kunye nemveliso.
Ukukhanya kwe-giga ngumvelisi onobuchule kunye nomenzi wendlela ende kwaye bathumela ngaphandle. Ixhaswe yiminyaka engaphezu kwe-25 ye-Lamps Ukuveliswa kwe-LAM kuphela, besikhonza abathengi eYurophu, kuMntla Merika noMzantsi Merile ngokuthe ngqo.
Ukuqala kwiindawo ezilula, ukukhanyisa kukaGiga kunikezelwa ingqalelo kwiimfuno zabathengi baseYurophu nabaseMelika. Saqala kwimogaqo yokwakhiwa kwesetyhula esibonelelwe ngabathengi kunye namava aqokelelweyo ngokuthe ngcembe kuyilo lwemveliso. Ngokuqonda kwethu ubuhle bemveliso kunye nobuhle bokukhanya kunye nesithunzi, ngokuthe ngcembe siye savelisa uyilo lwethu lwemveliso.
Namhlanje, ukukhanya kwe-giga kuneziseko ezimbini zemveliso eZhongshan City, iPhondo laseGuangdong, China, ngeemveliso ezingaphezu kwe-1000. Sinoluhlu olubanzi lweemveliso. Ngokusekwe kwisitayile sanamhlanje, iimveliso zigubungela ngaphakathi, ihlobiso kwintengiso.
Isibane se-giga singene kwicandelo lokukhokelela ixesha elide. Ukusukela ngo-2013, siphuhlise inkqubo yemveliso ye-LED. Isabelo seemveliso ze-LED nazo zanda ngokukhawuleza. Ukudityaniswa kwe-LED kunye nomqhubi, ulawulo oluphambili lwezixhobo zombane kunye nesicelo esiqolileyo seNksingiselo yeNqaku yokuthuthuzela kukhuphiswano olusisiseko lokuthwala.
Kule minyaka ingama-25 idlulileyo, ukukhanya kwe-giga kuthatha "abantu makuvuye ubuhle, intuthuzelo kunye nokufudumala okukhanya ukukhanya kunye nendlela yayo, kwaye uzibophelele kwifashoni yamva, kodwa ifikelelekile amaxabiso.
Ngo-2021, "i-kyocera intanda-bulumko yeKyocera" ikhutshiwe nayo nganye ngentliziyo.
Ukwaneliseka ngakumbi kubathengi bethu kubume bemgangatho kunye nenkonzo kuya kuhlala kwindawo yethu ephambili!